दशैंमा पनि चामल अभाव हुने! :: सुजिता कार्की :: Setopati
दशैंमा पनि चामल अभाव हुने!
जाजरकोट, भदौ २७
जिल्लाको बारेकोट क्षेत्रमा दशैंमा समेत चामल अभाव हुने भएको छ ।
चामल ढुवानीको प्रक्रियागत झण्झटका कारण नेपाल खाद्य संस्थानको बारेकोटको नायकवाडास्थित घाट डिपोमा दशैंअघि चामल पुग्ने अवस्था छैन । बारेकोट गाउँपालिका तोलखाना, धौलाकोट, रोकायगाँउ, मूल्यमा, जिरी, समाकोट, गोठगाउँलगायतका गाउँमा खाद्य संकट परेको छ ।
गाउँमा किनेर खान पनि अन्न छैन । गाउँमै उत्पादित अन्नले वर्ष दिनमा ६ महिना समेत खान पुग्दैन । बाँकी महिना खाद्य संस्थानकै चामलको भर पर्नुपर्छ । यातायात असुविधा र बाटोघाटो निकै अफ्ठ्यारो भएकाले निजी क्षेत्रका व्यापारीले विक्रीको लागि चामल नलिँदा थप समस्या भएको हो ।
यतिबेला चामलको माग अत्यधिक छ । तर डिपो रित्तै छ । खाद्य संस्थानले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चामल ढुवानीको लागि बोलपत्र आह्वान गरी सपना एण्ड सरोज कन्सट्रक्सन सेवा खलंगा– २ का नाममा ठेक्का स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ ।
तर १५ दिने सूचना जारी गरेर सल्लायर्सलाई ठेक्का सम्झौताको लागि संस्थानले बोलाएको छ । सप्लायर्सलाई १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्ने म्याद दिइएको छ । सो म्यादको अन्तिम मिती असोज ७ मा पुग्छ । असोज ५ गतेदेखि दशैं सुरू भइहाल्छ । ठेक्का सम्झौता गर्ने बित्तिकै ठेकेदार कम्पनीले ढुवानी गर्नेमा आशंका छ ।
‘हामीले दशैं अघि बारेकोटमा चामल पुर्‍याउने कोसिस गरिरहेका छौं,’ खाद्य संस्थानको वितरण महाशाखाका विभागीय प्रमुख सुरेन्द्रराज विष्टले भने। सदरमुकाम खलंगामा गत वर्षको मौज्दात पाँच सय क्वीण्टल चामल डिपोमा पठाउन जिल्लालाई निर्देशन दिएको विष्टले बताए ।
अहिलेसम्म ढुवानीको कुनै प्रक्रिया थालनी भएको छैन । खाद्य संस्थानका प्रमुख धर्मबहादुर बस्नेत जिल्ला बाहिर रहेका छन् । निमित्त प्रमुख रामप्रसाद पौडेल आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताउँछन् ।
सप्लायर्सले आगामी असारभित्र एक हजार क्वीण्टल चामल सदरमुकामबाट गाउँका डिपोसम्म ढुवानी गर्ने जिम्मा लिएका छन् । प्रति क्वीण्टल चामल एक हजार ४७५ रुपैयाँमा ढुवानी गर्ने गरी बिहिबार ठेक्का स्वीकृत भएको छ । बाटो बिग्रेकाले यतिबेला सदरमुकामबाटै घोडा खच्चडमा ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
तिहारपछि बाटो मर्मत भई आधा बाटोसम्म ट्याक्टर चल्ने भएकाले त्यतिखेर ठेकदारलाई ढुवानीमा सस्तो पर्ने हुन्छ । तत्काल ठेकेदारले चामल ढुवानी गर्नेमा स्थानीयवासीले आशंका गरेका छन् । सदरमुकामबाट बारेकोटसम्म खच्चडमार्फत ढसवानी गर्दा प्रतिक्वीण्टल दुई हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । बारेकोट गाउँपालिका– ४ का वडाध्यक्ष सिर्जना बस्नेतले दशैं अघि चामलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।
‘दुई छाक भात खान पाए हाम्रा लागि त्यही ठूलो दशैं हुने थियो’,उनले भने । उनले तत्काल चामल पठाउन सरकारसँग माग गरे । रासस
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २७, २०७४, ०३:०४:२४